Akụkọ - HEBEI RUBANG CARBON PRODUCTS CO., LTD mepụtara teknụzụ ọhụụ nke na - egbochi antioxidant ma nwee ihe ịga nke ọma na oct.
A na-eji teknụzụ nke mkpuchi antioxidant maka graphite electrode na electroite graphite nke igwe eletrik-arc steelmaking. ọ bụ site novolac epoxy, polyvinyl formal acetal, phosphoric acid, silicon carbide, silicon-dioxide, mejupụtara dị ka aluminom oxide, ferric oxide, boron nitride, norbide. a ụdị slurries, nwere ike na ahịhịa, ịgba, iteto ma ọ bụ impregnating usoro mkpuchi mbụ na electrode n'elu n'okpuru electrode dop, nwere ike nrapado buru ibu, oxidation-eguzogide siri ike, tinye uru n'ụzọ dị mfe, na-eji gradite gradite eme ihe iji belata 0.8-1.0kg na otu nchara nchara 7-8kg nke mbụ ọ bụla nụchaa ndabere.0933a mgbe graphite electrode antioxidant usoro nkà na ụzụ ọhụrụ mkpuchi ọhụrụ - agbatị graphite electrode iji oge 26 ~ 70.4%.
N'ime usoro iji graphite electrode maka ọkụ ọkụ aak mgbe ị na-emepụta nchara, n'ihi oke ọnọdụ ikuku oxidation, oxidation nke akụkụ electrode bụ ihe dị ka 60% nke mkpokọta oriri. antioxidants graphite electrode na 600 ~ 1800 ℃ nso, nwere ike izere kọntaktị electrode na ikuku ozugbo iji belata ikuku oxidation nke graphite electrode ma mee ka ndụ electrode dịkwuo ogologo.
Enwere ike iji ngwaahịa ndị a na-ejikọtaghị ọnụ na ngwaahịa mkpuchi, yana igbochi oxidation nwere ike ịbawanye mma. oxidation na-eguzogide ọgwụ na-ekpo ọkụ n'okpuru ngwaahịa ngwaahịa carbon dị elu, dị na ya iji kpuchie ya na electrodes graphite nke ọkụ eletrik na-eji ọkụ eletrik eme ihe, na-eme ka mmetụta mkpuchi oxidation na-eme ka ntaneti na-eme ka a na-egbochi ya dị ka n'okpuru usoro:
ND EL ELECTRODE
ELECTRODE oriri Mbelata (%)
IRI oriri ike
MARA: Na data bụ nsonaazụ nke mgbochi oxidation ule nke graphite electrode na 4 september 2017 si suzhou iron & steel group.
Mbelata nke ike oriri na-agbakọ dịka nchọpụta sitere na igwe igwe.